လောင်းကစားမဟာဗျူဟာ | Express ကိုအားကစား & ကာစီနိုလောင်းကစား | လျင်မြန်သော & ထိရောက် Access ကို
လောင်းကစားမဟာဗျူဟာ – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
သငျသညျဟူသောဝေါဟာရကို '' အားသာချက်ကစားသမား '' ကောင်းသောရရှိထားသူမကြာခဏဘယ်လိုထင်ပါသလဲ? မဟုတ်ကိုမကြာခဏအားကစားလောကရှိ အလောင်းအစား, ငါဆိုသည်ကား.
ကျွန်တော်တို့အတော်များများကြောင်းလူတိုင်းသူအမြင်ဖြစ်ကြ၏ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာအားကစားအကျိုးအမြတ်အပေါ်ကစားနည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့မကြာခဏနှင့်ရှည်လျားသောအလုံအလောက် play အဖြစ်.
ငါတို့ရှိသမျှသည် Bookmakers အမြဲတမ်းကစားသမားကျော်အစွန်းသိရကြ, နှင့်ကတ်များကိုကစားအတွက်သော့ချက်ကိုကိုင်ထား. သာအစွန်းထွက်ပင်တစ်လမ်းရှိခဲ့ပါလျှင်, တရားမျှတပြီးစတုရန်းကစားရန်; သာကစားသမားများလွန်းနေတဲ့အတွက်တိုင်းတခါအားသာချက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါလျှင်.
ကောင်းစွာ, စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်; တစ်လမ်းလည်းမရှိ! A ကောင်းဆုံးနှင့်ကောင်းစွာစီစဉ်ထား အလောင်းအစားနည်းဗျူဟာ သငျသညျအစွန်းကိုပေးနိုင်ပါသည်.
ဤတွင်အဆင့်မြင့်လောင်းကစားမဟာဗျူဟာ၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်တစ်ဦးမှာတစ်ဦးကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုအခြေခံန်းကျင်သင့်ရဲ့လမ်းကိုသိခန့်မှန်းတယ်, အဆင့်မြင့်ပိုက်ဆံချည်ငင်များအတွက် အလောင်းအစားမဟာဗျူဟာများ ညာဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ဗတ္တိဇံကိုခဲ့တာသူကိုကစားသမားများအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏အခြေခံများ.
မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးတစ်ခု (EV) ယင်းအတွက်အရေးအပါဆုံးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည် အလောင်းအစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း. ၎င်းသည်အတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသောအစီအစဉ်ဖြစ်နေဆဲ သို့ဖြစ်. အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည် အလောင်းအစား မြင်ကွင်း.
ရဲ့သင်နှင့်ငါ့ကို basketing ဘောလုံးတစ်ဦးပွဲစဉ်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဆိုပါစို့- ကောင်းစွာ, ငါစာသားဆိုလို! သင်တို့ကိုခြင်းတောင်းတိုင်းဘောလုံးကိုများအတွက်, ငါမှသဘောတူ သငျသညျပေးဆောင် $1. အလားတူပင်, ငါတောင်းကိုသငျသညျအကြှနျုပျကိုပေးဆောင်သောဘောလုံးကိုများအတွက် $1.
လောင်းကစားမဟာဗျူဟာဘလော့ Will အောက်ကအပိုဆုစားပွဲတင်ပြီးနောက် Continues
ယခု, ကျနော်တို့အနေနဲ့ထာနဲ့တူထင်သောအရာကိုအဘို့အ basketballs နှင့်နေဆဲမျှဆုရှင်ရှိနိုင်ပါသည်. ပျမ်းမျှ၏တရားတက်သည်များအတွက်ဖမ်းမိထားလို့ဖြစ်ပါတယ် $1 ကျွန်မချက်ချင်းနီးပါးကဆုံးရှုံးတက်အဆုံးသတ်စေ. ဒါကကစားပွဲအဆုံးရလဒ်ဖြစ်စေနည်းလမ်းတွေ swinging ၏တန်းတူအခွင့်အရေးရှိနိုငျသညျ့ကြားနေတန်ဖိုးကိုရှိသည်ဖို့စဉ်းစားသည်
အခုတော့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းဖို့; သင်ဟာ basketing ဘောလုံးငြီးငွေ့ရဟုမဆိုစေနဲ့ဂိမ်းဖြတ်ဖို့ရှေးခယျြ. ယခု, အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်မတစ်ဦးဆီသို့ဦးတည် inching သူဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ် အောင်ပွဲအနိုင်ရနှင့်အနံ့. ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့သင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းပေးဆောင်ဖို့သဘောတူသဖြင့်နေထိုင်ရန်နှင့်ကြာကြာကစားရန်သင့်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်စီမံခန့်ခွဲ 50 တိုင်းဘောလုံးကိုအဘို့အဆင့်ကိုသင်ခြင်းတောင်း. သင်သို့သော်, သင့်ရဲ့ကပ် အလောင်းအစားနည်းဗျူဟာ နှင့်ဆက်လက် ငါ့ကိုပေး $1 မတိုင်မှီကသဘောတူအဖြစ်.
အလေးသာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုရှိပုံကိုသတိထားမိ. သငျသညျကိုလုပ်စေခြင်းငှါ, တိုင်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် $1.50 သာဆုံးရှုံး $1.00 ပြန်. သို့ဖြစ်. ခွငျးအားဖွငျ့အကြိုးရှိ 50 တိုင်းအဘို့အဆင့် 1 သင်၌အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစား. ဒါကအပြုသဘောဆောင်မျှော်လင့်ဖန်တီး (+EV) ၏ 50 ဆင့်. သို့သျောလညျး, ငါ့ကိုဒီအငွေပမာဏကိုပေးဆောင်သည့်တစ်ဦးအဖြစ်, ငါအနှုတ်မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်ခံစားနေရပြီးတက်အဆုံးသတ် (-EV) ၏ 50 ဆင့်. အောင်မြင်သောအဘို့ အလောင်းအစား, အာရုံ + EV ကစားနည်းဝင်ငွေနှင့်ဆည်းပူးဖို့ဖြစ်နဲ့ရှုံး -EV ကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်.
Sports.expresscasino.co.uk ဘို့မဟာဗျူဟာဘလော့ Betting. သငျသညျအနိုင်ရဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါ!
အားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားဆိုက်ကို | Express ကိုအားကစားနှင့်ကာစီနို |…